Si fiican uga fikir qofka aad doonayso in aad guursato
» Si fiican uga fikir qofka aad doonayso in aad guursato
Si fiican uga fikir qofka aad doonayso in aad guursato. Sidee ayuu ahaanayaa wiilka aad rabtaa, ma mid jaamici ah, mid jecel in uu guriga markasta joogo, mid tareenin sameeya oo jecel sportiga ama mid jecel in uu xafladeeyo? Maad ogtahay sida uu ahaanayo wiilka aad rabto in aad guurasto ayaa waxa ay kuu sahlaysaa in aad dareento in uu yahay wiilkii saxda ahaa ee aad raadinaysay. Laakiin ogsoonow in ay haboon tahay in ay astaamahu ahaadaan sida dabeecadiisa,
naxariistiisa iyo qalbigiisa! Ayna haboonayn ku raacida kwa sida shaqadiisa, dhaqaaaha uu leehaya, quruxdiisa iwm.
Fadhiga ka kac
Habla badan ayaan dadaal badan samayn oo u maleeya marka ay waqti badan sugaan in uu u imanaayo wiilkii saxda ahaa. Wiil kastaa adiga ayuu ku rabaa Marka aad sidaa iska dhaadhicisid in uu wiil kastaa adiga ku rabo ayaa lagaa dareemayaa isku kalsooni, taasina waxa ay noqonaysaa mid dhab ah oo wiil kastaa adiga ayuu ku xiisayn doonaa.
Anonymous2/14/2011bogga raaxada guurka ugu fiican weeye boggan aad baad u mahadsantihiinReplyDeleteAnonymous8/25/2011Waa mahadsantihiin walaalaha raaxada guurka RUntii wxan in badan raadinayey wiil aqoon diin & maadiba le ,akhlaaq wanagsan ,naxariis badan, dadkiisa jecel ,isagana ay jecelyihiin,waji furan oo bulshaawi ah aan isla weeyni ku jirin, isku kalsoon, i jecel aniguna aan jeclahy .wey adagtahy in la helo wiil noo caas ah ,balse way fududahy inaad hesho nin lacag le ,mid qurxoon lkn ma fududa in la helo wiil somaaliyeed oo le sifooyinkaas ama noqon kara Human RESOURSE ,AlXAMDUlILAAH wan helay lkn wali ismaanu guursan INSHAA ALLAH WAN Iguursaneyna NOONA SOO duceeya IN ALLAAH calaf isugu kaaya daro naguna arzaaqo awlaad baariyiin,gabdhaha walaalahy ah waxn leeyahy ha raadinina dhaqaale iyo qurux ee raadiya dadnimada qofka taasaan waligeed dhamaaneynine.ReplyDeleteAdd commentLoad more...